'कम मूल्यमा धेरै फिचर भएको गाडी प्रयोग गर्ने ट्रेन्ड पूरा गर्न पोलो १.० ल्याएका हौं' - Recent Nepal News
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ०१, २०७५ समय: १३:११:५६
कम मूल्यमा धेरै फिचर तथा अप्सन भएको गाडी प्रयोग गर्ने ट्रेन्डलाई पूरा गर्न नाडा अटो शो सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि फक्सवागन सस्तो मूल्यमा पोलो १.० सार्वजनिक गरेर नयाँ तरंग ल्यायो । फक्सवागन भन्ने बित्तिकै असाध्यै महँगो गाडी भन्नेहरुका लागि गलत साबित गर्न नाडा अवधिभर आगन्तुकहरूको लागि पोलो १.० आधार बन्यो । फक्सवागन भन्ने बित्तिकै असाध्यै महँगो गाडी नै हो त ? यसलाई गलत साबित गर्न दिनरात नभनी काम गरिरहेका फक्सवागन गाडीको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता पूजा इन्टरनेसनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीर्इओ) विवेक बिजुक्छेसँग गरिएको कुराकानी
तपाईहरु नेपालका लागि फक्सवागनका आधिकारिक बिक्रेता अरु कम्पनीको तुलनामा फक्सवागनका गाडीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
सबैगाडीहरु एकैखालका हुने गरेता पनि अरु गाडीहरुको तुलनाका फक्सनवागनका गाडीहरु भिन्न खालमा रहेका छन् । हुन त देख्दाखेरी सबै गाडी एकै किसिमका देखिएपनि फक्सवागनको गाडीहरुको इन्जिनहरु बलिया ,टिकाउ खालका रहेका हुन्छन् ।
उपभोक्ताले फक्सवागन भनेपछि जर्मनी गाडी नै प्रयोग गर्न रुचाउँथे पछिल्लो समय भारतमा उत्पादन हुने गरेको गाडीहरुको प्रयोग हुन थालेको छ । जसले कम मूल्यमा धेरै फिचर तथा अप्सन भएको गाडीको प्रयोग गर्ने ट्रेन्ड बढ्दै आएको छ । त्यसैले नी अरु गाडीको तुलनामा फक्सवागनका गाडी राम्रा छन् ।
आम जनमासको रोजाईमा कतिको परेको छ फक्सवागनको गाडी, कस्तो रह्यो नाडा अटो शोमा प्रतिक्रियाहरु ?
फक्सनवागनका गाडीहरु आम जनमासमा यसअघि नै पर्दै आएको छ । पहिलाको अटो शो को तुलनामा हामी यस पटक गाडी बुकिङमा अग्रस्थानमा नै रहेका छौं । यस पटको हाम्रो आर्कषणको रुपमा रहेको थियो फक्सनवागनका पोलो १.० जुन हामीले नाडा अटो शो सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि फक्सवागन पोलो १.० सार्वजनिक गरेका हौं ।
१ हजार सिसीको यो गाडीले राम्रो माइलेज दिने, मेन्टिनेन्स खर्च कम भएको तथा मूल्य पनि कम भएका कारण उपभोक्ताबाट यसको प्रतिक्रिया सोचेको भन्दा राम्रो छ । यसपालिको नाडा अटो शो सुरु भएको तीन दिनमै यो गाडीबारे जानकारी लिन आउनेको संख्या साढे ७ सयभन्दा बढी पुगेको थियो । जसमध्ये ६० जनाले बुकिङ गरिसक्नुभएको छ ।
यसपालि हामीले सर्वसाधारणको त्यो धारणालाई चिर्दै साढे २५ लाख रुपैयाँमा फक्सवागन गाडी उपलब्ध गरायौं । यो समाचार जब सर्वसाधारणमा पुग्यो, सबैको ध्यान हामीतर्फ मोडिएको छ । नाडा अवधिभर आगन्तुकहरू पनि ‘साढे २५ लाखको फक्सवागन गाडी कुन हो ?’ भन्दै सोध्दै आएका थिए । पोलोको माध्यमबाट हामीले नयाँ तरंग ल्याउन सकेका छौं ।
सरकारले ठूला गाडीमा कर बढाए पछि फक्सवागनले त्यसैलाई लक्षित गरेर सस्तो मूल्यको पोलो १.० भित्राएको त होईन् ?
त्यो पनि केहि हद सम्म हो । ठूला गाडी भन्दा सस्तो गाडीहरु पनि रोजाईमा पर्न सक्छन् सस्तो भन्दैमा नराम्रो हुने भन्ने होईन । अन्य गाडीहरुको तुलनामा फक्सवागनको गाडीहरुमा इन्धन कम खर्च हुन्छ ।
आजको दिनमा पैसाको मूल्यांकनका आधारमा सर्वसाधारणले किन्न सक्ने गाडी ल्याएका हौं । पोलोको बिक्रीले बजारमा गति लिन्छ भन्न सक्ने दुई आधार छन् । पहिलो यसका सेफ्टी फिचर र दोस्रो यसको सिसी ९ सय ९९ सिसीको गाडी भएकाले यो गाडीमा रहेको ट्याक्स एड्भान्टेज अन्य गाडीमा पाइँदैन ।
विवेक बिजुक्छे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूजा इन्टरनेसनल (नेपालका लागि फक्सवागन गाडीको आधिकारिक विक्रेता)
होचा गाडीमा लागि नेपालका सडकहरु कतिको उपयुक्त छ, फक्सवागनका गाडीहरुको पहुँच राजधानी बाहिर कतिको रहेको छ ?
होचा गाडीहरुको लागि युरोप,अमेरिका, जापान लगायत अति विकशित देशको तुलनामा नेपाल, बंगलादेश लगायत देशमा गुड्ने गाडीहरु अति फरक रहेका हुन्छन् । युरोप,अमेरिकाको गाडीहरु याहाँ ल्याएर चलाउन मिल्दैन् र नेपालको लागि मात्र भनेर कम्पनीले गाडी बनाउने पनि होईन्न । सबै तिर एकै किसिमका रहेका हुन्छन् ।
फक्सवागनका गाडीहरु होचा भएता पनि नेपालमा लोकप्रिय नै रहेको छ । नेपालमा भित्रिएका यी गाडीहरु उपत्यकामा ६० प्रतिशत रहेका छन् भने ४० प्रतिशत राजधानी बाहिर नै रहेको छ । तर अहिले भ्याली बाहिर माग बढि हुँदै आएको छ ।
फक्सवागनका सर्भिस सेन्टरहरु नेपालमा कति रहेका छन् ?
अधिकांस सबैतिर वाट त्यस्तै प्रश्न आउने गरेका छन् । फक्सवागनका गाडी नै धेरै बिग्रदैन किन चाँहियो सर्भिस सेन्टर धैरै । अरु गाडीको कम्पनीलाई ३ वटा सर्भिस सेन्टर चाँहिदा हामीलाई १ वटा भएपनि पुग्छ ।
सर्वसाधारणले अहिले के बुझ्न जरुरी छ भने अरु कुनै सवारीको तुलनामा फक्सवागनको आफ्टर सेल्स मेन्टिनेन्स खर्च एकदमै कम छ किनकि अरु गाडी ४/५ हजार किलोमिटर गुडेपछि सर्भिसिङ गर्नुपरे पनि फक्सवागन १५ हजार किलेमिटर कुदेपछि मात्रै सर्भिसिङ गर्दा हुन्छ ।
इन्जिन लाइफको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म बिक्री गरेका ३५ सय फक्सवागन गाडीमा साढे २ लाख किलोमिटर गुडेका गाडी पनि छन् । तीमध्ये एउटाको पनि इन्जिन खोलिएको छैन । अरु गाडीको हकमा १ लाख किलोमिटर गुडेपछि इन्जिन खोल्नु सामान्य मानिन्छ । दाबी नै गर्नुपर्दा हामीले सात वर्षअघि बेचेको गाडीको नम्बर प्लेट निकालियो भने ब्रान्ड न्यु कार भन्दा कम्तीको देखिँदैन ।
प्राय जसो नेपालीहरुले दशै, तिहारलाई लक्षित गरेर सावारी साधन किन्ने प्रचलन छ,नयाँ उपभोक्ताले फक्सवागन नै किन रोज्ने ?
दशै,तिहारलाई लक्षित गरेर नेपालमा अटो शो चल्ने गरेको छ । नेपालको लागि अटो शो दशै मेला जस्तै हो । त्यसैले नै नेपालमा दशैलाई लक्षित गरेर सवारी साधन किन्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । गाडीहरु रोजेर बार्गेनिङनै गरेर किन्ने हो यो सिजनपछि किन्नको लागि आग्रह गर्दछु ।
सवारी उपभोगमा उपभोक्ताको स्वाद कोरियन, जापानिज, युरोपियन, अमेरिकन हुन् । फक्सवागन युरोपियन पावर हाउस हो । हामीजस्ता कम्पनीले २० वर्षपछिको आवश्यकता हेरेर अहिले नै गाडी डिजाइन गर्ने क्षमता राख्दछौं । युरोपियन प्रविधि, सुरक्षा, बलियोपन, इन्जिन लाइफमा उत्कृष्ट हुन्छ । फक्सवागनजस्तै भारतमा उत्पादित अन्य गाडीको तुलनामा फक्सवागनको गियर बक्स, बडी तथा इन्जिनको लाइफ २ देखि ३ गुणा बढी पाउनुहुन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो सेग्मेन्टका अरु गाडीको वजनभन्दा फक्सवागनको गाडी २ देखि ३ सय केजी बढी हुन्छ ।
अन्तयमा नेपाली बजामा फक्सवागनका आगामी लक्ष्य के छन् ?
कम मूल्यमा पोलो १.० जस्तो सेफ्टी फिचर स्ट्यान्डर्ड भएको गाडी भित्राएको फक्सवागनका आगामी लक्ष्य भनेको विद्युतीय कार । अबको दुई वर्षमा हामीले आठवटा एसयुभी, सेडा र ह्याचब्याक गरी १२ मोडलका विद्युतीय गाडी लन्च गर्ने योजना बनाएका छौं । फक्सवागन विद्युतीय कारमा विश्वमै पहिलो नम्बरमा पर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढेको छ ।
सन् २०१९ को मध्यदेखि हामी पनि विद्युतीय गाडी ल्याउने योजनामा छौं । हामीले ल्याउने गाडी फुल चार्ज गर्दा कम्तिमा ३ सय किलोमिटर कुद्ने र नेपाली सडकअनुसारको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको हुने छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण, मूल्य हेर्नुहुन्छ भने हामीले ल्याउने गाडी अविश्वनीय सस्तो हुने छ । इन्धन लाग्ने गाडीमा २ सय ५० देखि ३ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गर्छ तर, विद्युतीय गाडीमा भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्ने छैन । यसको अर्थ, हामीले ल्याउने विद्युतीय सवारीको मूल्य अहिले बेचिरहेको पेट्रोल–डिजेल गाडीभन्दा आधा सस्तो पर्ने छ ।
अरु कम्पनी र फक्सवागनले विद्युतीय गाडी निकाल्नुमा धेरै फरक छ । ती कम्पनीको विद्युतीय गाडी इन्धन लाग्ने गाडीभन्दा दोब्बर मूल्य पर्छ भने फक्सवागनको भने आधा पर्छ । इन्धन लाग्ने सवारी चढ्दा इन्जिन बिग्रिन्छ, गियर बक्स बिग्रिन्छ । मेन्टिनेन्स खर्च उच्च हुन्छ तर, विद्युतीय सवारी चढ्नुको फाइदा नै यही हो कि यसमा बिग्रिने केही पार्टस नै हुँदैन । एउटा ब्याट्री र एउटा मोटर भए गाडी चल्छ । झन्झट हराएर जान्छ ।